Real Madrid oo xiddig muhiim ah ee aan aheyn Raheem Sterling ka dooneysa Manchester City – Gool FM
(Madrid) 21 Oct 2019. Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in xiddig muhiim ah ee aan aheyn xiddiga reer England ee Raheem Sterling ka dooneysa kooxda Manchester City suuqyada soo aadan.
Xiddiga qadka dhexe kooxda Man City ee Kevin De Bruyne ayaan lagu soo waramayaa inuusan ku qanacsanayn la shaqeynta macalinka reer Spain ee Pep Guardiola.
28-sano jirkan ayaa lagu tiriyaa inuu yahay mid kamid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda uu hogaamiyo Pep Guardiola ee Manchester City, sidoo kale mid kamid ah xidigaha khadka dhexe ee ugu muhiimsan adduunka, sababa la xiriira taabashadiisa cajiibka ah iyo goolashiisa xiisaha leh uu dhaliyo.
Wargeyska “Don Balón” ee dalka Spain ayaa sheegay in Kevin De Bruyne uusan sameyn Karin qaab ciyaareedkiisa ugu fiican marka uu ku jiro garoonka, sababa la xiriira tilmaamaha Pep Guardiola, waana sababta uu uga fiirsanayo inuu ka tago Manchester City, si uu u tijaabiyo loolan cusub ee koox kale iyo horyaal kale ah.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Real Madrid kooxda xiisaha ugu balaaran ka muujineysa inay kala soo saxiixato Kevin De Bruyne kooxda Manchester City, waxayna u badan tahay in heshiiskiisa uu ku koco qoomo lacageed dhan 150 milyan euro.
Si kastaba ha noqotee, heshiiska uu Kevin De Bruyne ku joogo kooxda Manchester City ayaa wuxuu dhacayaa xagaaga 2023.